Kedụ ka m ga-esi mee ka ahụ m sie ike n’ụlọ? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Otu esi edozi ahụ ike - ngwọta bara uru
Otu esi edozi ahụ ike - ngwọta bara uru
Kedụ ka m ga-esi mee ka ahụ m sie ike n’ụlọ?
Na-amalite. Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido, chee ihu maka 30 nkeji nke obimmega ahụọ dịkarịa ala ugboro atọ n'izu, na minit 20 ruo 30 nke ike na-arụ ọrụ ugboro atọ n'izu. Jide n'aka na mgbatị ahụ ike gị na-ekpuchi isi akwara niile, na elu gịahụ, gbadaaahụ, abdominals na azụ.
Hey ụmụ okorobịa, ọ bụ Sera! Nabata na ọwa m ma nabata na edemede mbụ m sitere na 20182018 ka bụ afọ ihere nye m Ikwu ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịbụ onye ihere na 2018 enweghị m ike inye aka. N'isiokwu a, etinyewo m ọtụtụ ndụmọdụ na aghụghọ na ndụ hacks ka ị nwee ike ịnwe ezigbo ahụike 2018 na nkọwa. Mee ka m mara ụdị ngwaọrụ ị na-ekiri isiokwu YouTube maka na m chere na ndị mmadụ na-ekiri isiokwu YouTube? Mana mee ka m mara ma ọ bụrụ na ị na-ele ya na ekwentị ma ọ bụ mbadamba nkume ma ọ bụ kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ ma nye isiokwu ahụ isi mkpịsị aka ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị, ị debanyebeghị aha, pịa Debanye aha, m na-etinye akụkọ ọhụụ kwa izu yana ọbụlagodi wantchọrọ iso m na Instagram nke a bụ ebe a, bịa kwuo hey.
Mana ka anyi gaa n’isiokwu a. Otu n'ime ụzọ kachasị mfe iji megharia usoro ahụike gị ma nwee ahụike na ahụike maka 2018 bụ n'ezie ịme ka nri gị ka mma, na anaghị m ekwu na ihe niile ị ga - eme bụ iri broccoli na naanị mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ruo echi mana otu ihe kachasị dị mfe bụ imeghe ngwa nju oyi na oge ọzọ ị ga-aga ụlọ ahịa, chee echiche maka ihe m ga-azụ maka m, yabụ dị ka mmiri ara ehi chocolate maka mmiri oyibo, agbanwere m french fries maka nri nduku fries kwa, m wee gaa ụfọdụ mgbatị. Ndị a bụ ụfọdụ ndụ dị adị nke mgbatị ahụ m.
Ime ihe n'eziokwu, anaghị m achọ ịga mgbatị ahụ. Ekwuru m ya. Ọ masịghị m.
Ọ na-agwụ ike ma enwere m ihere nke ukwuu mgbe onye ọzọ nọ n'ime. Ọ dịkwa m ka amaghị m etu esi arụ ọrụ. Echere m na ọ bụ n'ihi na enweghị m mmasị ịga mgbatị ahụ.
Usedjọ ọzụzụ na-atụ m n'agbanyeghị na akụkụ ọzụzụ abụghị akụkụ m kpọrọ asị. Ọ bụ akụkụ ahụ dị mma. Ya mere maka mụ onwe m, achọrọ m ịzụ na ụlọ m na uwe m dị mma, yabụ ọ bụrụ na ị naghị arụ ọrụ ma ịchọrọ ịmalite ime ya, wee malite ịme ihe ị hụrụ n'anya, dịka ịgba egwu ma ọ bụ ịgba ọsọ ma ọ bụ naanị soro ndị enyi gị soro bọọlụ.
Aga m akwado ịkwado mpempe akwụkwọ ma ọ bụ onye nhazi ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ ka ị nwee ike ịdee mmega ịchọrọ ịme, yabụ ị nwere ike ịlele ha iji hụ na ị mezuru ha, ana m eme ihe a, biko mee ka m mara ma ọ bụrụ na ị na-eme mana m ga-ekwukarị na enweghị m ike ịme mgbatị n'ihi na anaghị m enwe mkpali ime ya ma m na-anwale ma chere na a ga-akpali m ma ọ bụ na agaghị m enwe mkpali nke mere na anaghị m azụ ọzụzụ. Onye ọ bụla ọzọ? Mgbe m nwere onye nhazi, ọ na-adị m ka mmụọ nsọ dị ukwuu karịa ka m dina n’akwa ma ghara iri fries maka nri ụtụtụ? Mana echere m na e degola onye nhazi ahụ ebe m na mmega ahụ m niile. Enwere m mmetụta nke mmụọ nsọ, Ọ dị mma, ya mere onye umengwụ dị umengwụ Fitness Life Hack bụ kpakpando 25 na-awụda oge ọ bụla ị na-apụ n'ụlọ ịsa ahụ iji nweta obere mmega ahụ, ọ dị oke egwu, mana ọ na-atọ ọchị ọkacha mmasị gị adịghị mma nri.
Ọ dị m ka ọkacha mmasị m ọ ga - abụ chocolate ma ọ bụ ice cream ma ha adịghị mma. Ma enwere m mmetụta na usoro a Mee N'onwe Gị nwere ike dochie ha abụọ mana ọ bụ naanị na ihe ị na - eme bụ ijide yogọt na akpa ziplock ma gbanye ya. otu mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, mee ka yogọt ghee n'abalị ma BAM ị nwere obere ibe dị ka yogọt oyi kpọnwụrụ dị ka ibe chocolate kama dịka na-enweghị chọkọleti na ọ dị mma unu, enwere m ike ịmara ya ụbọchị niile. Ha dị oke mma, ka anyị bụrụ ndị dị adị, oge ụfọdụ ihe kacha sie ike n ’ọzụzụ dị ka amaghị ihe a ga-eme, ebe ị ga-ebido, kedu akụkụ ahụ iji zụọ.
Ma achọtara m nke a dị mfe N'onwe Gị na Pinterest na n'ụzọ bụ isi ị ga - ewere obere akpa mmiri -Pop SticksDịpụ ha n'ime agba atọ dị iche iche ka agba ọ bụla na - anọchite anya akụkụ dị iche iche nke ahụ gị nke ị ga - egosipụta. Ozugbo ị chachara ụcha gị, ihe niile ịchọrọ ime bụ iji nkọcha ma ọ bụ ederede ma ọ bụ pensụl wee bido idepụta mgbatị dị iche iche na-atọ gị ụtọ ịme. M ga-etinye usoro ihe omume na ihuenyo maka unu, ma mkpịsị m na-acha anụnụ anụnụ bụ maka enweghị ike na ụfọdụ omume m bụ osisi na ịnọdụ ala na ụkwụ na-ebuli elu.
Ugbu a, m na-ekpe ikpe mbụ m dị ka onwe m na 7th ọkwa n'ihi na amaara m na m nwere mmasị ịhapụ nri ụtụtụ maka otu izu na ụlọ akwụkwọ sekọndrị n'ihi na echere m na ọ bụ ihe dị mma ma echetara m na agụụ gụrụ m ma ugbu a, enwere m mmasị na-eteta ụtụtụ gaa nri ụtụtụ, n'eziokwu, nri ụtụtụ nwere ike ịbụ otu n'ime naanị ihe kpatara m ji esi n'àkwà m bilie n'ụtụtụ, mana nri ụtụtụ dị oke mkpa ma ọ kachasị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịrụ ọrụ n'oge ụbọchị Achọrọ mmụba nke ike ozugbo ị tetere na agaghị m agha ụgha na m ga-ahụ tost maka nri ụtụtụ n'ụtụtụ nke na-agwụ ike Mana ọ bụ n'ezie ọsịsọ ma dịkwa mfe, mana ọ bụrụ na ịchọrọ nhọrọ nri ụtụtụ ọsọ ọsọ ma dịkwa mfe, nnukwu efere mkpụrụ osisi a bụ n'ụzọ anọ o na ato uto na akuko m ji obi eziokwu chee na inwere ike ime ya ososo karia otu tost. Yabụ ee, eleghị anya ịmara, mana m na-eme listi ọkpụkpọ maka oge ọ bụla ma ekwenyere m n'ezie na ịme listi ọkpụkpọ dị mkpa ọkachasị maka ọzụzụ. Abụ ndị m na-ege mgbe m na-azụ ọzụzụ dị iche na abụ m na-ege n’ụbọchị nkịtị.
Chọghị ịbelata nwayọ egwu mgbe ị na-achọ ịgba ọsọ na igwe ịgba ọsọ n'ihi na ọ ga-abụ na ị ga-eme ka ọ dị ka nduku ma kwụsị. Yabụ, mgbe ị na - eme egwu egwuregwu gị, gbaa mbọ hụ na ije gị ga - aga ka i wee nwee ike ịmalite ịgba ọsọ na ị nwere ike bido mgbatị gị ma ama m na ụmụ nụla otu nde ugboro mkpa mmiri na m ' O doro m anya na m gụrụ ebe na nso nso a na ahụ mmadụ bụ 60% mmiri nke nzuzu na ịnọ na mmiri dị oke mkpa, ọkachasị mgbe ọsụsọ na mgbatị ahụ, na amaara m ọtụtụ ndị na - eme n'ezie - ị nweghị mmasị na uto nke mmiri, ma ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị uto nke mmiri mgbe ahụ i nwekwara ike gbalịa inye mmiri gị na mmiri na tomato ma ọ bụ lemons dị nnọọ iji jide n'aka na ị ka nwere ọtụtụ mmiri dị ka na-amasị gị ọ possibleụ drinkingụ na N'ezie echefula gị Achọghị akụrụngwa ahụike dị oke ọnụ iji pụọ ma na-arụ ọrụ, ị nwere ike n'ụzọ nkịtị ị ga-apụ n'èzí gị N na-apụ ma na-aga maka ịgba ọsọ ma ọ bụ n'ụzọ nkịtị na-ejide ụdọ awụgharị ma na-awụlikwa elu na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ m gụkwara n'oge na-adịbeghị anya ịpụ apụ ga - enyere gị aka ịkwụsị nrụgide ọ bụrụ na ị bụ onye s agbagha, pụọ n'èzí nke ahụ bụ maka isiokwu a, na-atụ anya na ụmụ okorobịa ahụ nwere obi ụtọ na ya, na-enye mkpịsị aka gị mgbe ị mere ma echefukwala ịhapụ okwu n'okpuru, mee ka m mara ma ọ bụrụ na ị nwere mkpebi afọ ọhụụ ọ bụla, ma lee ị na nke m na-esote isiokwu, ka ọ dị!
Olee ụzọ atọ mmadụ nwere ike isi na-adị gara gara?
Ihe Ise iji meziwanyeNkịtịAhụike
Na-a moreụkwu mmiri na obere iko mmanya. N'ihi na aru bu isi mejuputara mmiri, ino hydrated bu ihe di nkpa nye giaruahụike.
Rie nkpuru osisi na inine ozo na obere nri ngwa ngwa.
Ihe mere mmega ahụ ji dị mkpa na ụbụrụ ahụike na ahụ ike na-emega ahụ ike site na mmega ahụ bụ otu n'ime ndụmọdụ kachasị site na ndị ọkachamara ahụike na gburugburu ụwa Ahụike ahụike na ahụ erughị ala Ahụhụ isiokwu a na-elekwasị anya ụfọdụ uru bara uru nke imega ahụ na ụbụrụ na ahụ, nke mere na mmega ahụ na ụbụrụ ma na-akwado ụbụrụ n'ụzọ na-enweghị isi na n'ụzọ na-apụtachaghị aka, dị ka otu isiokwu na blog Ahụike Harvard. Imega ahụ na-ebelata mbufụt nke nguzogide insulin ma na-akpali mwepụta nke ihe uto na ụbụrụ nke na-emetụta uto nke mkpụrụ ndụ ọbara ọhụrụ ihe ndị a na-akwalite ụba na nlanarị nke sel ọbara ọhụrụ yana n'ụzọ na-enweghị isi na-eme ka ụbụrụ nwee ahụike na ụra ma belata nsogbu nrụgide na nchekasị, ya mere egosipụta Ahụhụ Ise nwere ụfọdụ mmetụta ndị a: Nọmba otu, ọmụmụ ihe ncheta emere na hippocampus na ụmụaka, ndị okenye, na ndị agadi gosipụtara na usoro ụbụrụ toro mgbe mmega ahụ aerobic gasịrị. Hippocampus bụ akụkụ nke ụbụrụ na-echekwa ncheta ma bụrụ ihe dị oke mkpa n'ịmụta nọmba nke abụọ.
Imeziwanye uche itinye mgbatị na-eme ka ikike ilekwasị anya na ọrụ leghara ihe ndọpụ uche anya yana ijide ma mekwaa ihe omume Aerobic Mmezi mmekọrịta na ụmụ akwụkwọ yabụ dị oke mkpa nye ụmụaka toro eto na ndị agadi yana ọnụọgụgụ ahụike ọgụgụ isi atọ dị ukwuu na-akwalite mmụba mgbatị ahụ. Ezigbo ma kwesiri iji ya mee ihe dị ka ihe ngbanwe nrụgide ọzọ. Nnyocha izu asatọ sitere na 2010 gosipụtara oke mbelata na d'leh mgbe yoga na Ntụgharị uche amygdala bụ akụkụ nke ụbụrụ, nke na-etinye aka na nhazi nrụgide nchegbu na nchekasị. nọmba 4 selata nke cognitive ojuju Imega ahụ na-egbu oge na mmalite nke uche eyi na dọkatụrụ adọka mgbaka, karịsịa ndị agadi. Otu saịtị iji mezuo ndụ nwata iji zere ọrịa ọgụgụ isi na-abịa na afọ.
O bipụtara otu ọmụmụ gbasara ọrịa na-atụ aro na ụmụ nwanyị ndị toro eto na etiti etiti nwere pasent iri asatọ nke ohere ịda ọrịa karịa ndị ọgbọ ha bụ ndị dabara adaba n'ụzọ kwesịrị ekwesị bụ nsonaazụ nke ahụike na ụmụaka buru oke ibu Na-echekwa Ahụ site na Afọ Ajụjụ Dị ka ọmụmụ e bipụtara na Journal of Aging Research, ọ na-atụ aro na mmega ahụ nke a kwadoro maka ndụ niile jikọtara obere ihe ize ndụ nke ịmalite ọrịa ndị na-adịghị ala ala dị ka ọrịa Ọrịa shuga na-arịa ọrịa obi na akwara obi na-emetụta ọrịa ịka nká ọtụtụ oge. obi na ngụgụ ahụ ike na imega ahụ oge niile, ma na-adịkarị ala ma na-ebelata ike, na-ebelata ohere ịnweta ọrịa akwara obi. Imega ahụ na-eme ka ahụ ike nke obi na ike ịmịnye ọbara na-ewusi ike. Akpa ume na akụkụ ndị ọzọ nke akụkụ ahụ - ngụgụ na-eburu ọsọ ọsọ iji soro mmega ahụ wee sikwuo ike.
Nọmba asatọ na-abawanye oke ike na ike ọzụzụ dị elu na ọzụzụ dị ala na mgbatị dị elu ma ọ bụ mgbatị dị elu maka mmụba nke ndu ndu na ike na ọzụzụ ike nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-enyekwa aka na mgbanwe nke metabolism Mee ka ụba ọkpụkpụ nwee ike belata mmerụ ahụ na ọbụlagodi iwughachi. furu akwara Akwara ụlọ dị mkpa iji gbochie izu ike metabolic ọnụego na-eduga na ibu ibu ugboro ole ọzụzụ na ala ugboro ọzụzụ nyere aka melite dabere uka nakwa dị ka d ike na ndị ikom na ndị inyom ọnụ ọgụgụ itoolu mma cholesterol etoju mgbe nile na-arụ ọrụ na imega ahụ ala ọbara cholesterol etoju, si otú a gbochie omume nke Coronary Heart Disease Obi Mwakpo Obi na Strokes Dọkịta na-atụ aro aerobic ma ọ bụ ibu ibu ọzụzụ iji jide n'aka na ọ dị mma Cholesterol Etoju na-Erute Number 10 Mgbochi na Management nke Ọrịa Ọrịa gulargachi Mmega ahụ aerobic ma ọ bụ iguzogide ọzụzụ na-egbochi ọbara shuga na-ewuli elu insulin uche na-abawanye na ahụ nwere ike ịbawanye glucos e n'oge na mgbe ụdị ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ nke na-enyere ahụ aka ịmị calorie, dị ka B. Ije ije, ihicha, ịgba ọsọ, egwuregwu bara uru ma kwesiri itinye ya na usoro ụbọchị. Isi amo Maka ụmụaka, ndị okenye na ndị agadi, ọ dị mkpa itinye mgbatị oge niile na ndụ anyị kwa ụbọchị iji lekọta ahụ dị mma yana ọrịa ndụ ndụ iji gbochie
Kedu mmemme na-esure abụba ọsọ ọsọ?
Ogologo oge dị eluọzụzụ(HIIT): O nwere ike ịbụ otu n'imekasịna ọtụtụ oru oma ụzọ na-idaafọabụbama belata ahụ dumabụbapasent HIIT bụ oge dị mkpirikpi nke siri ikemmega ahụnke na-emekarị anaghị agafe 30 nkeji, na obere oge ezumike nke oge mgbake nke 30-60 sekọnd.bọchị 2020
Olee ọrịa ndị a pụrụ igbochi site na mmega ahụ?
Imega ahụ mgbe niile na-enyere aka ime ka ahụike, ahụike, na ogo ndụ gị niile dịkwuo mma. Ọ na - enyere aka belata nsogbu gị nke ọrịa na - adịghị ala ala dị ka ụdị ọrịa shuga 2, obiọrịa, ọtụtụ ọrịa cancer, ịda mba na nchekasị, na mgbaka.
Karịsịa otu esi egbochi ọrịa obi. Ugbu a obi gị bụ akwara.
Dịkwa ka akwara ọ bụla ọzọ, ọ chọrọ ọkọnọ nke oxygenated ọbara iji rụọ ọrụ nke ọma. Ọ na-enweta ọbara nke aka ya site na akwara obi na akụrụngwa ha, nke dina n'elu obi. Ọrịa obi nwere ike ime ha silty.
Nweta ihe ndị a na-akpọ ihe eji eme ihe. Ugbu a ọ bụrụ na ha na-abụkarị silty, ndị mmadụ nwere ike nweta ihe a maara dị ka angina, nke bụ ihe mgbu obi nke na-adịkarị mgbe ị na-arịgo ugwu ma ọ bụ na-eri nri. Mana oge ụfọdụ enwere ike inwe nsogbu nke na-agbawa.
Ihe mgbochi ndị a egbochiri ma nwee nkụchi obi. Ma olee ihe ndị na-akpata, na-akpata, ma na-akawanye njọ ọrịa obi? Ọ bụrụ na anyị elelee ha anya, ị smokingụ sịga bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa. Mgbe amachibidoro ịse anwụrụ na ebe ọha na eze, anyị hụrụ oke mmụba dị ukwuu na ọrịa obi ọgụ.
Nke ahụ mere n’ime ọnwa isii na iteghete. Ya mere anyị maara na ise anwụrụ na-ebute ọrịa obi ma nwee ike ịkpalite nkụchi obi. Ọzọ bụ ọbara mgbali Ihe siri ike banyere ọbara mgbali bụ na ị maghị na ị nwere ya.
Yabụ ọ bụ ezigbo echiche iji tụọ ọbara mgbali gị. Ọ dị mfe ma ugbu a ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ya n'onwe ha. Nke ọzọ bụ ọbara shuga, ọrịa shuga.
Ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa shuga, ị nọ n'ihe ize ndụ dị ukwuu nke ọrịa obi. Ihe kachasị mkpa bụ na ị na-elekwasị anya ma na-edozi shuga ọbara gị. Na-agbaso ndụmọdụ dọkịta gị, ị na-a medicationụ ọgwụ ahụ, maọbụ ọ bụrụ na ị nọ na nri, nọgidesie ike na nri ahụ.
Ọ dị obere ka ndị mmadụ gwọọ cholesterol ma ọ bụrụ na ha enweghị akụkọ ntolite ezinụlọ. Ma ọ bụ amaghị. N'ihi na ọ bụrụ na cholesterol gị nwere ọtụtụ ihe ọjọọ na obere ihe dị mma, dọkịta gị nwere ike ikpebi gị na cholesterol na-agbada Ta. itinye na blets na-maara dị ka statins.
Mgbe ahụ, ka anyị lelee nri n'onwe ya. Ugbu a, e dere kọleji n'ihe ndị m dere n'osisi ndị ahụ. Enwere otutu cholesterol, mana nnoo enwere ụdị di nma, nke anyi na akpo HDL, na udiri ojoo, LDL.
Ya mere, mgbe a na-enyocha cholesterol gị, ịmara ihe ọma ị nwere dị mkpa n'ihi na ihe ọma na-ebelata ọrịa obi na oke njọ ị nwere. Mmega ahụ dị oke mkpa ma ọ na-atọ ụtọ, ọ bụghị n'ihi na ị chere na mmega ahụ bụ oh? , M na-ifelata, ma nke ahụ abụghị n'ezie usoro. Mgbe m na-arụ ọrụ, ama m na ezigbo cholesterol m na-arị elu na cholesterol ọjọọ m na-agbadata.
Anyị chọpụtakwara na ọ nwere nnukwu mmetụta mgbochi mkpali. Obere mbadamba nkume ndị ahụ na-agba ọkụ ma ị na-azụ mbufụt ahụ. Enweghị ọtụtụ ihe ị ga-eme ugbu a.
Ugboro atọ ma ọ bụ anọ n’izu ụka, nkeji iri na ise ruo iri atọ, jiri nwayọ na-aga. Kwesighi ịbụ onye na-agba ọsọ marathon. Ihe ọzọ bụ mmanya.
Ugbu a, anyị niile maara na mmanya na-aba n'anya maka gị n'ọtụtụ buru ibu, agbanyeghị, obi abụọ adịghị ya na otu ma ọ bụ abụọ n'ụbọchị dị mma maka ọrịa obi. Ọ nwere mmetụta bara uru na mbenata ọrịa obi. Yabụ enwere ọtụtụ ihe ị ga - eme iji gbochie ọrịa obi site na dọkịta gị wee mee nyocha ndị a.
Ma ọ bụrụ na ị nwere akụkọ ntolite ezinụlọ, jiri ya kpọrọ ihe.
Kedụ ka m ga-esi nwee akpụ taa na ụbọchị asaa?
Ndụmọdụ na-Akwụ: Kpochapu nri esichara.
Mgbe ị na-achọ ibu ibu ọsọ ọsọ, nye ahụ gị nri okike ndị ọ nwere ike ịgbari, ma jụkwa ihe ọ bụla batara na ngwugwu. Greaves na-ekwu ka ị na-etinye ego mgbe ị na-apụ n'ụlọ nri, kwa. 'Gbalịa salads na protein eghe. Mafere ofe. 'Ọgọst 6 2012
Kedu ihe bụ nsogbu ahụike 3 nke enweghị mgbatị ahụ kpatara?
Obere ọkwa nkemmega ahụnwere ike inye aka na ọrịa obi, pịnye ụdị ọrịa shuga abụọ, ụfọdụ ọrịa kansa, na oke ibu.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na anaghị m emega ahụ?
Ọ bụrụị naghị arụsi ọrụ ike ị na-eme ka ahụike gị dịkwuo n'ọtụtụ ụzọ. Ọrịa obi na-arịa ọrịa obi, ọrịa strok, ọbara mgbali elu, iku ume, ahụ ọkụ, obere ume, nkwonkwo siri ike, osteoporosis, adịghị mma, ibu ibu.
Walkingga ụkwụ na-aga?
Dabere na NHS, ndị okenye kwesịrị ịdị na-eme 'opekata mpe nkeji iri ise na ise nke ime ihe ike kwa izu'.Na-eje ijea na-atụle kwa izu ammega ahụihe mgbaru ọsọ, na pụrụ inyere gị aka iru ume na mma obi na obi - ma ị ga-agba mbọ hụ na ị na-aga na a 'brisk' ijeụkwụ.
eme achịcha sook elu mmanya
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - eri nri mana ị naghị emega ahụ?
Mmegamgbe ị na-eleghara anyanri gịnaanị abụghị ezigbo atụmatụ ọnwụ, na-ekwummega ahụọkà mmụta sayensị bụ Katie Lawton, MEd. “Iji felata,gịkwesịrị ịmịkwuo calorie karịagịiri ma ọ bụ iri obere kalori karịanke giahụ mmadụ na-eji ya kwa ụbọchị, ”ka Lawton na-ekwu. “Ọ bụrụ na i meghịnwere caloric mpe,gịagaghị adalata. ”bọchị 2020
Ọ dị mma ịhapụ mgbatị ahụ maka ụbọchị 2?
Na-amatanke girụpụtana-abụ nsogbu mgbe ịmaferen'ihi na kaririụbọchị abụọn'usoro, ka ndị ọkachamara na-ekwu. Ọ dị mfe ịnwe otuAgbaghara mgbatịiji banyeabụọ, atọ na ndị ọzọ. Ọ bụokay to missotu ma obumgbatị abụọma igodo bụ mgbemaferekarịrịụbọchị abụọn'usoro.Eprel 16 2019
Kedu ụzọ kachasị mma iji chekwaa ahụike gị?
Ihi ụra mara ihe. Leepra bụ ntọala gị iji jigide usoro ahụike ma rụọ ọrụ n'ogo kachasị elu gị dị ka onye ọchụnta ego. Dị ka mgbatị, a ghaghị ịhazi ụra. Nnyocha e mere egosiwo na àgwà ihi ụra dị mma nwere ike inyere gị aka ijikwa eriri gị.
Kedu otu esi echekwa ahụ ike gị mgbe ị na-arụsi ọrụ ike?
Wzọ 6 iji nọgide na-enwe ahụ ike gị mgbe ị na-arụ ọrụ zuru oke 1. Hazie oge mgbatị gị. 2. leepra mara ihe. 3. Bido omenaala na ahu isi ike na aru oru. 4. Nwee okike na multitask. 5. Mee ọzụzụ dị oke mkpa nye enyi gị. 6. Nwee Atụmatụ B.
Kedu ihe bụ ndụmọdụ kachasị mma maka ịga nke ọma?
5 Atụmatụ dị mfe maka ịga nke ọma. 1 1. Na-emega Ahụ Kwa .bọchị. Na-emega ahụ kwa ụbọchị ma ọ dịkarịa ala otu awa. Ikwesighi igbu onwe gị ka ị ghara ịgba ọsọ, ịgba ọsọ, wdg, mana ị ga-enwerịrị ụdị 2 2. Rie nri na oke nri nri. 3 3. Na-esochi Calories na nri oriri kwa ụbọchị. 4 4. Jide n'aka na ị ga-arahụ ụra. 5 5. Nọgide Na-akpali Gị.